भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउने खतरनाक षडयन्त्रमा ओली सरकार: भरत दाहाल « Today Khabar
प्रकाशित ५ भाद्र २०७५, मंगलवार १३:११
राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालको जन्म २०१८, दाङ भएको हो त्रिविबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दाहाल २०३४ सालदेखी बिद्यार्थी राजनीतिमार्फत बामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय छन् । सुरुमा ने.क.पा. (चौथो महाधिवेशन) त्यसपछि ने.क.पा. (मसाल) त्यहाँ बिद्रोह गरी ‘डाइनामिक यूथ लिग’ गठन हुदै पछि ने.क.पा.(मशाल) मा बिलय देखि ०४९ सालमा एकताकेन्द्र हुँदै माओवादी आन्दोलनमा । भुमिगत राजनीति सुरु । २०५५ सालमा माओवादीवाट बिद्रोह गरी ‘देशभक्त कम्युनिष्ट लिग’ गठन । ०५७ मा एकताकेन्द्रमा बिलय । एकताकेन्द्र माओवादीमा बिलय भएपछि पुन बिद्रोह ।
अहिले राष्ट्रिय जागरण अभियान नामक संगठनमा क्रियाशिल । माओवादीका कडा आलोचक । अचेल राष्ट्रवादका एजेन्डाहरुमा सामाजिक सञ्जा लमा तिखो बहस छेडिरहेका पाइन्छन्, दाहाल । फेसबुकमा उनले लेख्ने टिप्पणीहरुलाई कतिले अमर्यादित मान्छन् भने कतिले साहसिक र सत्यको नजिक भन्दै तारिफ पनि गर्छन । यिनै चर्चित राजनैतिक बिश्लेषक भरत दाहालसंग स्वदेश नेपालका प्रधानसम्पादक इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरितले भदौ एक देखि लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐन र यसले सृजना गरेको तरंग लगायत देशको समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानीमा दाहालले ब्यक्त गरेका धारण यस्तो छ :-
दिल्लीमा गरिएको १२ बुंदे समझदारी पछि नेपाल समाधानहिन द्वन्दमा फस्दै गएको छ । हाल देशमा भएको शासन ब्यबस्था नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको छैन । हामीले बेलैमा होस् नपुर्याए देशले थेग्न नसक्ने पो हो कि भन्दै दाहाल आशंका गर्छन ।
दाहाल भन्छन्- देशलाई ब्रम्हलुट गर्ने नेताहरुलाई कार्वाही नहुने हुदा जुनै कानुन आए पनि त्यसको बहसले तर्क हुन् सक्छ तर मूल समस्या समाधान हुदैन ।
आज नेपालमा आएको कानुनमा कसको लगानी कति छ कुन एनजीओले कस्तो भूमिका रहेको छ त्यसको मुल्यांकन नगरिकन टिप्पणी गरेर फाइदा नरहेको भन्दै एनजीओ/आइन्जियोले नेपालको सांस्कृतिक धरातल तोड्न चाहन्छन त्यही भएर बिभिन्न स्वार्थ समुहलाई उचाल्ने र पछार्ने गरेको छ । बिदेशी शक्तिको एउटै ध्येय छ नेपाललाई अस्थिर बनाउने हो, त्यही भएर यहाँ अधिकारको नाममा बिभिन्न अराजक कार्य गर्ने शक्तिलाई सहयोग गर्छ ।
त्यसैको कडीको स्व: धीरेन्द्र शाहको छोरीलाई नागरिकता नदिनु , जुन सुन्योजित षडयन्त्र कै एक भाग रहेको दाहालको दाबि छ ।
केहिसमय पछि राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालको नियमित भिडियो ब्लग स्वदेशनेपालमा शुरु हुदैछ
हाल संसदमा बहस हुदै आएको बहुचर्चित नागरिकता संसोधन बिधेयकको एक मात्रै उद्देश्य भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएर तराईमा घुसाउने नै हो ।जुन २०६२ /६३ पछिको सबै भन्दा डरलाग्दो स्थिति हो । २०६३ पछिको जन्मको आधारमा प्रदान गरिएको नागरिकता भन्दा यो नयाँ ऐनले दिने नागरिकताले नेपालकै अस्तित्व माथि प्रश्न उठ्ने पो हो कि भन्दै दाहालको संकेत देखिन्छ ।
माओबादी जनयुद्धको आवरण नेपाली भए पनि यो बिदेशी शक्तिले नै योजनाबद्ध ढंगले गराएको समयले प्रमाणित भैसकेको बताए दाहालले । प्रचण्ड र बाबुराम निमित पात्र पनि होइन केबल बुईख्याच्या मात्रै भएको कठोर टिप्पणी गरेका छन् ।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारमा संग्लन भएका राजनैतिक ब्यक्तिहरु अर्को ग्रहबाट आएका होइनन् त्यही भएर यो सरकारबाट चमत्कार आशा गर्नु नै बेकार हो । यही बिन्दुमा नेपालीहरुमा भ्रममा रहेको दाहालले बताए । जुन ब्यक्तिहरुबाट माफियातन्त्र शुरु भयो तेसैले माफियातन्त्र खारेज गर्छन भनेर पत्याउनु नै गलत भएको दाहालको दाबि छ ।